Kooxo Burcad ah oo shacabka ku dhibaya Dharkenley | KEYDMEDIA ENGLISH
Kooxo Burcad ah oo shacabka ku dhibaya Dharkenley
Dhamaan degmooyinka Gobolka Banaadir, ayaa hore ula dhibaatoonayay kooxo mootooyin dheereeya wata, oo shacabka ka dhaca taleefannada, burcadda ka dhillaacday demada Dharkenley, ayaana uga sii dari doonta xaaladda hubanti la’aanta amni ah oo shacabku wajahayay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaar ka mid ah xaafadaha demada Dharkenley ee Gobolka Banaadir, ayaa laga dareemayaa xaq xooggan, kadib markii ay degmadaas ka abuurmeen kooxo burcad ah oo koox-koox iskula socda, kuwaas oo u daadanaya guryaha gabal-dhaca kadib.
Qoysas ka barakacayay, Waaxda 2aad, Laanteeda Saddexaad ee Dharkenley, ayaa Keydmedia Online, u sheegay in ay naftooda ula baxsanayaan, degmooyinka kale ee gobolka, kadib markii habeen ka hor kooxahaan burcadda ah, laantaas ku dileen Saddex ruux.
Sida ay KON, u sheegtay marwo Dahabo Xasan, burcadda oo dhallinyaro u badan ayaa ku hubeysan, Baangado, Faasas, Toorey iyo Budad, waxana jajabnayaan guryaha, ka hor inta aysan geysan dhibaatada ay maagan yihiin, oo dilku ugu weyn yhay, dhac iyo kufisina qeyb ka yihiin.
“Halkaan wali dad ayaa ku danbeeya, marka aad eegto sida looga qaxay agagaarka Ceelsablaale, halkaas qofna kuma harin, xaafaddaan oo sidaan u haawaneysa ayaaba bura joogta, dadkaan cidna uma maqna, maamulka Degmadu, waxba ma qaban”, ayuu yiri Cali Xaashi.
Cali, wuxu sheegay in marka la kala raacdeeyo burcadda, oo dadka degaanka hubkooda la soo baxaan si ay isku difaacaan ay kooxda dhibaatada wadda soo raacayaan, Ciidan ku labbisan dhanka Ciidanka Dowladda Federaalka, si ay u qaataan hubka shacabku isku difaacayo.
Maamulka Gobolka Banaadir, oo uu ugu horreeyo Cumar Finish iyo kuwa ku magacaaban amniga gobolka ayaa ku fashilmay, ka shaqeynta badqabka shacabka danta yar ee ay canshuurta xoogga looga soo aruuriyo biishaan, waxayna kaliya ka sheeqaan danaha Farmaajo.